ပမ်ပေါ်လစီ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
အီလက်ထရောနစ်စာပို့ခြင်း၏အခြေအနေတွင်, spam များကိုမလိုလားသောရည်ညွှန်း, အမြောက်အများသို့မဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိမက်ဆေ့ခ်ျ, ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်သည်လူကိုစေလွှတ်. မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် – hasazero-tolerance spam policy. ငါတို့ကဲ့သို့အများကြီးသင်ပြုသကဲ့သို့, spam များကိုမုန်း.
automated spam များကိုစစ်ထုတ်ခြင်း
မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်'' s ကိုစာတိုပေးပို့ရေးစနစ်များကိုအလိုအလျှောက်အားလုံးအဝင်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျစကင်ဖတ်စစ်ဆေး, နှင့်စပမ်းဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျများထွက် filter.
အဘယ်သူမျှမမက်ဆေ့ခ်ျကို filtering ကိုစနစ် 100% တိကျမှု, နှင့်အခြိနျမှနျမှတရားဝင်မက်ဆေ့ခ်ျ filtered ထွက်ပါလိမ့်မည်အားဖြင့် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်'' s ကိုစနစ်များ. သင်ဤသတင်းစကားမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ယုံကြည်လျှင်သင်တို့ကိုစေလွှတ်ပါပြီ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
သငျသညျလွင်ပြင်စာသားထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအားဖြင့် spam များကို filter များဖမ်းမိထားကြောင်းသတင်းစကားများအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ် (i.e. အဘယ်သူမျှမက HTML), မည်သည့် attachment များကိုဖယ်ရှားခြင်း, နှင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျ dispatch မတိုင်မီ malware များအဘို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေဖြစ်ကြောင်းသေချာ.
မလိုချင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိ မှ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်
သင့်ထံမှမည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုခံယူသောမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်အတွက် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် သို့မဟုတ်သုံးပြီးပို့ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်'' s ကို spam များကိုဖြစ်ဖို့စဉ်းစားစေခြင်းငှါစနစ်များ, ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် နှင့်ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မည်.
ဒီ Anti-spam များကိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများ
မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် ဒီ website တွင်ဗားရှင်းအသစ်ထုတ်ဝြေခင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်မှာဒီ Anti-spam များကိုမူဝါဒကပြင်ဆင်ရန်စေခြင်းငှါ.